Chroma-muhiimka ah (oo loo yaqaan "screen cagaaran") saamaynta yihiin caadiga ah ee wax soo saarka video. Waa maxay saamaynta waxan sameeyo waa laguu ogolaado in aad si aad u jeeda ka dambeeya actor oo hufan, si aad u dhigi karto actor ee deegaanka ka duwan studio ah.
Marka hore, waxa ugu fiican ee aad samayn karto si loo hagaajiyo tayada leh xukunka waa in la hagaajiyo sida aad u toogtaan. Halkan waxa ku jira toddobo xeerarka wax soo saarka asaasiga ah:
Jilayaasha waa in ay ahaadaan ugu yaraan 10 fuudh ka hor shaashadda cagaaran. Tani waxay ka soo jeeda "daadinta" agagaarka jidhkooda ama garbaha fogaado light.
Guud ahaan, ma tuuray Hooskooda shaashadda cagaaran. Noqo cagaha rasaas aad u taxaddar
Asalka cagaaran waa in sida siman sida ugu macquulsan. Rinjiga had iyo jeer waa ka wanaagsan yahay dhar; fogaado qabsatay iyo laalaabka.
Asalka cagaaran waa in si habsami leh shiday, labada dhinac ilaa dhinac iyo kor ilaa hoos. Waxaan isku dayaa inaan leeyihiin bandhigay ka soo jeeda cagaaran oo u dhexeeya heer 40-50% ilaaliye waveform ah.
Waxaa jira xiriir ka dhexeeya MAYA sida asalka ah waxaa shiday, iyo sida jilayaasha yihiin iftiin Maqaalkani waxa uu muujinaya doonaa in.
Light asalka u macaanaa. Light jilayaasha aad u riwaayadaha.
Ha welwelin ku saabsan asalka cagaaran buuxin jir ah. Waxa keliya oo loo baahan yahay in si buuxda hareereeyeen cidhifyada jilayaasha aad. Mattes Qashinka waxaa loo isticmaalaa in laga takhaluso junk agagaarka geesaha.
The image screen cagaaran waxaa had iyo jeer kaalinta kor ku soo jeeda. Waxaad u dhigi karaa shaashadda cagaaran ama background image galay storyline Primary ah. Waxaan u arkaa in ay fududahay in la dhigay asalka ee EDC Primary ah, sababtoo ah waxa ay taasi fududahay sixiddiisa image shaashadda cagaaran. Laakiin tani Gaarna waa doorasho shakhsiyeed.
Dooro shaashada clip cagaaran.
Laga soo bilaabo Browser Raadka ugu> category Keying, double-riix saamayn Keyer ah, taas oo ay khuseysaa clip ee la doortay. (Waxa kale oo aad jiidi karaan saamaynta on top of clip ah, haddii aad u halmaanteen in ay doortaan clip green-screen ugu horeysay.)
Ha baqin hadii aad image muuqataa cajiib ah - loo hagaajin doono.
Riix icon Color Sample ah. Tani waxay u ogolaaneysaa ganaax-'reebi doorashada ee midabka asalka ah.
In image green-shaashadda, jiidi in ay doortaan qaybta ka wakiil oo ka soo jeeda. Waxaan isku dayaa inaan helaan meel u dhow wajiga, laakiin sidaas ma aha dhow in aan si qalad ah ay doortaan timaha dabacsan ama maqaarka.
Your muhiimka ah waa in si fiican si degdeg ah. Inta badan, malaha halkan waad joojin kartaa. Laakiin waxaa jira saddex hagaajin kale oo ka dhigi kartaa adiga oo eega muhiim ah, xataa si fiican:
Nadiifinta ilaa matte ah
Riix badhanka Matte in ay muujiyaan muhiimka ah sida sawir cad oo ku saabsan asalka madow aad.
Your Hadafkayagu waa ka dhigi cad ee sawir adag, taas oo macnaheedu yahay Doolaal, iyo asalka adag madow, taasoo la micno ah oo hufan. Dheellitir boholaha dhammaystira iyo sliders Edge Distance ilaa fure u muuqataa adag. (Waayo, furaha aad u xun, waxaad u baahan doontaa in aad sidoo kale qabsato Color Xulashada, hoos ku xusan.)
Haddii gees ah waa mid aad u cadeeyay, ama baahida caawiyo, guji icon cidhifyada.
Markaas, guji iyo jiidi line ka sawir inay soo jeeda ee shiraac ah. Jiid slider ka midpoint (meesha aan dulqabo yahay) ilaa cidhifka u muuqataa ugu fiican karaankeeda ah. Kala duwan qaabab video kayeel fudud (ProRes), halka kuwo kale (HDV, AVCHD) kayeel badan ka adag. Kaamil ah waa wax aan macquul aheyn - ugu fiican ee aad awoodo.
Iska yaree Final bixisaa afar uga faaidaysan dheeraad ah oo hoose ee filter keyer ah:
Kii u horreeyey ayaa saddex qof loogu talagalay in lagu nadiifiyo furayaasha liidata toogtay - akhri files FCP X Help in ay bartaan sida shaqo kuwaas. (Waxaan u isticmaalaa qalabka Color Xulashada in nadiifinta furaha aad u madow ayaan isticmaali tusaale ka dib in this article.)
Duubo Light, inkastoo, waa farshaxanka. Maxaa sameeyaa waa milmaan midabo ka soo jeeda galay cidhifyada sawir, in la sameeyo oo dhan fiirin muhiim ah oo dheeraad ah "organic," sida haddii sawir iyo asalka ay ahaayeen dhab ahaantii in meel la mid ah.
Tani waa saamayn ugu khiyaano ah, laakiin aad u qabow.
Twirl hoos Light laalaab iyo qabsato slider Lacagta iyo daawado waxa dhaca. Jiid ah sliders kale oo aan aragnaa waxa dhaca. Waxa ugu fiican oo ku saabsan goobta waxaa weeye in marka ay u muuqato wanaagsan inaad, wuu ku wanaagsan yahay. Inta ay saamaynta gebi ahaanba waa mid adiga. Xusuusnow, Light laalaab oo kaliya saameyn ku cidhifyada sawir iyo waa in la xeelad loo isticmaalo.
Marka aad samaysay, inaad leedahay fure weyn Raadinta!
Nadiifi image LEH WAJI QASHINKA A
Mararka qaarkood, si kastaba ha ahaatee, aadan haysan, ah, laga yaabee, ee image green-screen ugu fiican ee la shaqeeyo. Halkan, tusaale ahaan, waxaa jira alaab muusiko nalalka sawir, la shaashad aad u helin shiday cagaaran ee asalka ah. (Taah ... taasi waa uun raxiimka.)
Marka aad jiid muhiim ah - oo ah film-hadli abuurista ah shot cagaaran-shaashadda, sida aan kor ku qeexan - iyo aad u hesho sida ugu fiican ee suura gal raadinaya, waxaa jira hal talaabo dheeraad ah: ku daray matte qashinka ah in laga takhaluso qashinka oo dhan ku wareegsan aad jilayaasha.
Marka aad qaadato muhiimka ah sida ugu fiican ee aad awoodo raadinaya - taas oo ay dhacdo in tani ma aha wax alla wixii wanaagsan - jiidi saamayn maaskarada (Raadka> Keying> maaskaro) on top of clip green-shaashadda.
FIIRO GAAR AH: saamaynta Waji waa in had iyo jeer lagu daray ka dib markii uu saamayn ku Keying, si Waji ka hooseeyo Keyer ee Isbatooraha ah.
Markaas, jiidi kasta oo ka mid ah afar wareegyada in la abuuro qaab sida in sawir image waxaa jira gudaha, iyo wax walba oo aad rabto in aad ka horjoogsanaya in ka baxsan yahay. Halkan, tusaale ahaan, waxaan saaro taaganyihiin nuurka, kulli waxay ku laayeen asalka cagaaran oo la dillaaciyo sare ee image ka. Waxaan helay saamayn waji xidhkani uu si fiican u shaqeysaa marka la mariyo clip ah oo ku xiran.
Si kastaba ha ahaatee, xaddidaadda weyn ee saamayn Waji waa in aad kaliya haysato afar dhibcood si ay ula shaqeeyaan. Waa halka saamayn free yimaado, kaas oo kuu ogolaanaya inaad si ay u abuuraan qaabab aad uga dabacsan waxaa la. Waxaa qoray Alex Gollner oo waxaa laga heli karaa website-kiisa - alex4d.wordpress.com/fcpx/ - Waxaan ku talinaynaa in saamaynta uu heer sare ah.
Filter chroma-muhiimka ah ee FCP X noo ogolaadaa in la abuuro qaar ka mid ah waxyeelada la yaab leh. Ku raaxeyso ciyaaro la.
Tani waa tutorial aasaasi ah oo ku saabsan Apple Final Cut Pro X, xirfad software video tafatirka. Si kastaba ha ahaatee, haddii video tafatirka waa cusub oo aad si, tixgelin Wondershare Filmora (asal ahaan Wondershare Video Editor) ee Mac . Tani waa aalad awood laakiin si sahlan loo isticmaalo dadka isticmaala kaliya bilaabaya. Download version maxkamad free hoos ku qoran.
Top 10 Windows Badeli kara ee Pro Goo Final
> Resource > FCP > FCP X: Abuur ah Chroma-Muhiimka ah (Green-screen) Saamaynta